सर्तहरू र गोपनीयता नीति
मसँग भएको सबै कुरा,
केवल मेरो प्रभुको अनुग्रह र दयाको कारण हो.
tgMember® (दर्ता गरिएको ट्रेडमार्क) टेलिग्राम प्लेटफर्ममा सबै सफ्टवेयर र उपकरणहरू एकमात्र विक्रेता हो.
टेलिग्राफ मार्केटिङका ​​लागि उपलब्ध सबै रोबोट र सफ्टवेयर हामीले सङ्कलन गरेका छौं, र ती मध्ये केही हामी द्वारा विकसित गरिएको छ.
हाल, more than 50 robots and about 20 software are active and usable.
सफ्टवेयरको सही सञ्चालन सुनिश्चित गर्न, कृपया सुनिश्चित गर्नुहोस् कि .NET र Java रन टाइम तपाईको कम्प्युटरमा स्थापित छ.
सबै ग्राहकहरूले तिनीहरूको खरिदको साथ यी सबै नियमहरू स्वीकृत र स्वीकार गरेका छन्.
सबै खरिदहरू सफ्टवेयर खरिद गर्दा तिनीहरूको सबै जानकारी आवश्यक छ (नाम. उपनाम. राष्ट्रिय संहिता. फोन…) सही रूपमा, अन्यथा सबै जिम्मेवारी र परिणामहरू आफैं महसुस हुन्छन्.
सबै व्यक्तिहरूले एक फलो-अप भुक्तानी कोड प्राप्त गर्न आवश्यक छ र इच्छित आवेदन प्राप्त गर्न कार्यक्रम प्रविष्ट गर्नुहोस्.
मानिसहरूले पछिको फलो-अप र समर्थनको लागि आफ्नो भुक्तानी कोड ट्र्याक राख्न आवश्यक छ.
गलत तरिकाले खरिद वा निक्षेप को मामला मा, वा पहिले फिर्ता अनुरोध गरिएको छ भने 24 घण्टा र एक सेट सम्झौता ग्राहकको खातामा फिर्ता गरिनेछ.
खरीद गर्नु अघि ध्यान दिनुहोस् र सबै टिकट वा कल मार्फत तपाइँका प्रश्नहरू सोध्नुहोस्.
सङ्कलनमा कुनै तेस्रो पक्ष वा अन्य कुनै किसिमका कार्यक्रमहरू र धोखाधडीको फाइदा र प्रयोगको लागि कुनै जिम्मेवारी छैन।.
अन्य साइटहरूबाट कार्यक्रमहरूको खरिद हामीसँग पूर्ण रूपमा अप्रासंगिक छ र हाम्रो टोलीको लागि कुनै जिम्मेवारी छैन, र यसको खरिदका सबै नतिजाहरू आफैलाई महसुस गरिएको छ र सावधानीपूर्वक अन्य साइटहरूबाट अनुप्रयोगहरू खरीद गर्न। .
सेवा र समर्थन टेलिग्रामको भर्चुअल स्पेसहरूमा सीमित छ, आदि.
हाम्रो वेबसाइट मार्फत आधिकारिक र बिक्री समर्थन गर्ने एक मात्र तरिका.
टेलिफोन थप जानकारी र तपाईंको प्रश्नहरूको समीक्षाको लागि हो.
टिकट मात्र आह्वान र आधिकारिक छ, त्यसैले यो संग्रह संग आधिकारिक संलग्नता लागि टिकट पेश गर्न सिफारिस गरिएको छ.
tgMember आधिकारिक वेबसाइटहरू बाहिर उत्पादनहरू बिक्री संग्रह द्वारा स्वीकृत छैन, र कुनै समर्थन वा अपडेट प्रदान गरिने छैन.
टेलिग्रामका नीतिहरू र सर्तहरू परिवर्तन भएका छन् र दैनिक थप प्रतिबन्धहरू सेट गर्न सकिन्छ, तर प्राविधिक र विज्ञ टोलीले कार्यक्रम सुधार र अद्यावधिक गर्ने प्रयास गर्नेछ तर उनीहरू बाध्य छैनन्.
टेलिग्रामको नीति र सर्तहरूमा परिवर्तन र टेलिग्राम प्लेटफर्ममा प्रतिबन्ध बढाएपछि:
सबै बिक्री पछि सेवा र समर्थन सम्मको लागि प्रदान गरिएको छ 1 प्रत्येक आवेदन खरिद गरेको महिना पछि, र त्यसपछि सङ्कलन प्रतिक्रिया र बिक्री पछि सेवाहरू प्रदान गर्न कुनै जिम्मेवारी छैन! सेवाहरूको पनि कुनै समर्थन छैन!
क्रेताहरूले सफ्टवेयर प्रयोग गरेर आफ्नै व्यक्तिगत च्यानलहरू प्रयोग गर्न र उनीहरूको समूह र गतिविधिहरू विस्तार गर्न सक्छन्.
साथै, खरिदकर्ताहरूले सदस्यहरूको बिक्री मार्फत पैसा कमाउनको लागि सफ्टवेयरहरू प्रयोग गर्न सक्छन्, दृश्य, विज्ञापन र आदि.
हाम्रो कुनै पनि सफ्टवेयर सोशल मिडियामा बेच्नुहोस्, साइट, वा अन्य तरिका निषेधित छ.
सबैलाई निःशुल्क पहुँच उपलब्ध छ वा कुनै पनि ठाउँमा ती प्रकाशन, निषेधित छ.
कृपया कुनै पनि ठाउँमा सफ्टवेयर प्रकाशित गर्नबाट टाढा रहनुहोस्.
यदि हामीले अवलोकन गर्यौं वा हामीले सूचना पाएका छौं,
कुनै पनि सफ्टवेयरको प्रकाशन वा बिक्रीको लागि, (व्यक्ति वा साइट) :
2. तिनीहरूको पहुँच गुमाउनेछ र नयाँ अद्यावधिकहरूबाट वञ्चित हुनेछ.
सबै व्यक्तिहरूलाई जवाफ दिन बोलाइनेछ र अपराधीलाई मुद्दा लगाइनेछ.
तिनीहरूलाई अरू मानिसहरूलाई कहिल्यै नदिनुहोस्.
हाम्रो कुनै पनि सफ्टवेयर सोशल मिडियामा बेच्नुहोस्, साइट, or other way Is निषेधित.
सबैलाई निःशुल्क पहुँच उपलब्ध छ वा कुनै पनि ठाउँमा ती प्रकाशन, is निषेधित.
विवेक को मामला मा, सङ्कलनले यी नियमहरू परिवर्तन गर्न सक्छ जब तिनीहरू चाहन्छन् र त्यसपछि वेबसाइटमा घोषणा गर्न सक्छन् र सबै व्यक्तिहरूले यसलाई स्वीकार गर्न आवश्यक छ।.
व्यक्तिलाई थाहा नभएको अवस्थामा उसले सबै नयाँ कानूनहरू स्वीकार गरेको र बेवास्ता भएमा कुनै दायित्व वा समस्याको अर्थ हो।. यो व्यक्तिको आफ्नै जिम्मेवारीमा छ.
सबै वास्तविक र भर्चुअल लाइनहरू र प्रोग्रामहरू खरिदकर्तालाई डेलिभरी गर्नु अघि जाँच गरिन्छ र त्यसपछि डेलिभर गरिन्छ र डेलिभरी पछि कुनै वारेन्टी हुँदैन।, स्वीकार गर्न कुनै बहाना पनि छैन.
विज्ञापन कार्यक्रमहरू यदि प्रयोगकर्ता यी कार्यक्रमहरूको कानूनसँग असंगत छ भने, सक्षम अधिकारीहरू र सबै व्यक्तिगत इजाजतपत्रहरूको कानूनलाई असक्षम घोषणा गरेको अवस्थामा, र उनको प्रोफाइल र व्यक्तिगत जानकारी यी सन्दर्भहरूमा प्रदान गरिनेछ
सबै कार्यक्रमहरू र लाइनहरूको प्रयोग ग्राहकको लागि पूर्ण रूपमा जिम्मेवार छ, र डिजाइन र प्रोग्रामिङ टोलीले कुनै जिम्मेवारी लिने छैन, त्यसैले ग्राहकले कार्यक्रमको जिम्मेवारी लिएर खरिद गरी प्रयोग गर्नुपर्छ.
कार्यक्रम वा क्रेता को वास्तविक र भर्चुअल लाइन मा दोष को मामला मा, यो गर्न आवश्यक छ 10 आधिकारिक मा इच्छित दोष प्राप्त भएको दिन पछि (वेबसाइट) नोटिस गर्न र संग्रहमा कुरा गर्न.
माथि 10 कार्यक्रम वा सेवा वा उत्पादनहरूको वितरणको दिन कुनै पनि जिम्मेवारी स्वीकार गर्दैन र फिर्ता गरिने छैन.
डेलिभर गर्नु अघि सबै कार्यक्रमहरू जाँच र परीक्षण गरिन्छ.
डेलिभरी पछि, ग्राहकले स्थापनाको लागि अनुरोध गर्न सक्छ र कम्पनीले खरिदकर्ताको लागि सफ्टवेयर स्थापना र सुरुवात गर्न र कुनै पनि समस्या तुरुन्तै घोषणा गर्न मद्दत गर्दछ।. (अन्यथा कुनै पनि बहाना स्वीकार्य छैन.)
वैध र आधिकारिक भुक्तानीहरू वेबसाइट भुक्तानी गेटवेमा मात्र गर्नुपर्छ, र पैसा स्थानान्तरण वा अफ-साइट खरिदहरूको मामलामा (समर्थन टोली, अन्य साइटहरु, टेलिग्राम भित्र,…) हामी मान्दैनौं.
सेवाहरू र अद्यावधिकहरू साइट भित्र दर्ता गरिएका आदेशहरूद्वारा मात्र प्रदान गरिनेछ, अर्डर नम्बर संग, ट्र्याकिङ नम्बर (वा हाम्रो द्वारा जारी खरिद बीजक).
नामहरूको प्रयोग, छवि र लोगो, कार्यक्रमहरू, र ब्रान्डहरू पूर्ण रूपमा अवैध छन् र अभियोग कानूनी छ.
डिजिटल बिक्री प्रक्रियाको कारणले इनभ्वाइस प्रदान गर्दैन, खरीददारहरूले खरिद गर्दा प्रिन्ट गर्न पूर्व-इनभ्वाइस लिन सक्छन्.
बेचिएका इजाजतपत्रहरू हुन्3महिना ग्यारेन्टी, र समस्या को मामला मा, यसको समर्थन छ.
मूल्य, जुन ग्राहक अर्डरको लागि हो, मान्य छ र कर योग्य थपिनेछ.
यस साइटमा सबै खरिद कार्यहरू ई-वाणिज्यको नियमहरूको अधीनमा छन्.
बिक्रेतालाई खरिदकर्ताको व्यक्तिगत जानकारी मानिनेछ, प्राधिकरणको विवेकमा, र यो जानकारी पूर्णतया गोप्य बनाउन र औपचारिक र वैधानिक बाहेक कुनै पनि कानूनी वा कानूनी व्यक्ति प्रदान नगर्नुहोस्।.
विक्रेता क्रेता बारे सही र पूर्ण जानकारी प्रदान गर्न बाध्य छ.
खरिदकर्ता-व्यक्ति प्रणालीको हार्डवेयर र सफ्टवेयरसँग खरिद गरिएका सामानहरूको असंगतताको लागि विक्रेतासँग कुनै जिम्मेवारी छैन।.
विक्रेता प्रशिक्षणको लागि जिम्मेवार छैन र खरिद गरिएका सामानहरूसँग कसरी काम गर्ने.
बिक्रेताले कुनै पनि कारणले अर्डर रद्द गर्न सक्छ र अर्डर पठाउनबाट टाढा रहन सक्छ.
खरिदकर्ता मेल मार्फत विक्रेतालाई यसको पूर्ण र सही जानकारी प्रदान गर्न बाध्य छ.
खरिदकर्ताले खरिदको अर्डरको जानकारी प्राप्त गर्न र विक्रेताको साइट मार्फत हार्डवेयर र सफ्टवेयर आवश्यकताहरू सहित सामानहरूको बारेमा आवश्यक जानकारी खरिद गर्न आवश्यक छ।, र त्यसपछि आफ्नो अनुरोध पेश गर्नुहोस्.
कृपया सामान छनोट गर्दा होसियार हुनुहोस्, डेलिभर गरिएको कोड प्रतिस्थापन वा फिर्ता गरिएको छैन.
यो स्टोरको घोषणा ठेगाना बाहेक अरू कुनै ठेगाना छैन र समान साइटहरूको लागि उत्तरदायी हुनेछैन.
सामाग्री को कार्यकारी नियमहरु अनुसार 38 र 48 ई-वाणिज्य कानून को, लेख 1 अनुच्छेद “उपभोक्ताको व्यक्तिगत विशेषताहरु संग बनाइएको सामान, जसको व्यक्तिगत पक्ष स्पष्ट हुन्छ, वा तिनीहरूको प्रकृतिको कारण तिनीहरू फिर्ता हुन सक्दैनन् वा चाँडै भ्रष्ट र भ्रष्ट हुन्छन्।” रद्द गर्ने अधिकार उपभोक्ताको लागि लेनदेन निष्क्रिय हुनेछ, त्यसैले अर्डर र भुक्तानी गरे पछि, उपभोक्ताले खरिदबाट फिर्ता लिन हकदार हुनेछैन.
यदि समस्याहरू जस्तै ईरान प्रतिबन्धहरू निर्माता वा सर्भरले ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरूको विफलताको कारणले गर्दा, यो विदेशी निर्माताका अधिकारीहरूको जिम्मेवारी हो र विक्रेताको लागि उत्तरदायी हुनेछैन.
खरिद आदेशको अर्थ खरिदकर्ताले माथिका सर्तहरू अध्ययन गरी स्वीकार गरेको छ र विरोध गर्ने अधिकार अस्वीकार गरेको छ।.
सबै नियमहरू परिवर्तन हुन सक्छ, सर्तहरूको यो पृष्ठमा गएर खरिदकर्तालाई सधैं सूचित गरिनुपर्छ!
सबै आदेश र समर्थन इरानबाट हो समय क्षेत्र GMT संग बनाइनेछ +3:30.
शुक्रबार बाहेक हरेक दिन जवाफ दिने काम हुनेछ4बजे2am.
अर्डर को लागी, समर्थन, स्थापना र कन्फिगरेसन, लाइसेन्स सक्रिय वा रिसेट गर्न अनुरोध, मद्दत वा कुनै अनुरोध र समस्या,
माथिको घण्टा र जवाफ र बोल्न पर्खनुहोस्.
सन्देशहरूको उच्च मात्रा र प्रतिक्रिया र समर्थनको लागि समयको अभावको कारण, कृपया प्रतिक्रियाको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्.
यदि पछि 12 पैसा स्थानान्तरणबाट घण्टा र तपाईंले अर्डर गर्नुभयो, र तपाईंले अहिलेसम्म आफ्नो अर्डर प्राप्त गर्नुभएको छैन,
यो मतलब छ:
हामीसँग इन्टरनेटमा पहुँच छैन वा हामीलाई तपाईंको अर्डरको बारेमा थाहा छैन.